Laza Adina Malagasy No 3 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar ~ Sujets et corrigés du BAC 2020
Laza Adina Malagasy No 3 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar
09:37 Emy Team
1. Milaza antony telo mahatonga ny Malagasy hitsimbina fatratra ny Aina.
2. Milaza lafin-javatra telo mampiseho ny maha-kanto ny tononkalo.
Hoy I Charles Ranaivo ao amin’ny Gazety Fiainana Lah 64, Avril 1934:
“Sambatra ny olona izay mbola mahay midera, mankasitraka, sy tia ny namany izay soa sy ambony, fa mbola velona sy manan-kery ary mitombo ao aminy ny tsirin’ny fahasoavana sy ny fahamboniana”. Fakafakao sy tsikerao izany teniny izany.
Efitra telon’ny fiainana!
Miefitrefitra ny fianam-dRaolombelona. Misy efitra voalohany, dia ilay itovizany amin’ny biby rehetra; dia izy teraka sy mitombo ary maty, mahare fahafinaretana na fijaliana amin’ny nofony, mampiasa ny zava-boahary hahasoa ny fianany. Ambaratonga ambany indrindra io amin’ny fiainan’olombelona: fiainana ara-batana, fiainana ara-pivelomana.
Efitra faharoa kosa, dia ilay iarahany amin’ny olombelona tahaka azy; dia izy mifanerasera sy mifampikasoka, ka mifankatia na mifankahala, mifamalifaly na mifanorisory. Ambaratonga ambonimbony kokoa io: fiainana araka ny fo, fiainana ara-pihavanana.
Ary efitra fahatelo farany, dia ilay ao anaty miankina amin’ny safidy sy ny finiavana tokana: dia izy mizaka ny tenany na ho tsara na ho ratsy, na ho mahitsy na ho meloka, eo anatrehan’ny eritseriny tsy azo salovanina. Ambaratonga ambony indrindra io: fianana ara-panahy, ara-pahamarinana.
R. P. Rahajarizafy (Filozofia Malagasy tak. 134)
Fanontaniana: Hadihadio io sombin-dahatsoratra io